ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးများ - Lifestyle Myanmar
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမရတာတွေ၊ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ၊ ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲ ပင်ပန်းနေတာတွေ၊ ကိုယ်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကိုယ့်ကို ပင်ပန်းအားနည်းစေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကတိတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ပေးပြီး မတည်နိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲနာမည်ပျက်ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ ကတိမျိုးကို မပေးမိပါစေနဲ့။ ကတိပေးပြီးရင်လည်း ပေးထားတဲ့ကတိကို တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
၂. အမှားလုပ်ထားပြီး မတောင်းပန်တတ်ခြင်း
တောင်းပန်ခြင်းက မာနကို ထိခိုက်စေပါသလား? အမှားလုပ်ထားပြီး ပြန်မတောင်းပန်တတ်တာလောက် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကလူကြီးဖြစ်နေရင်တောင် အကြီးအကဲနေရာရောက်နေရင်တောင် ကိုယ်တိုင်အမှားလုပ်ထားမိတယ် ကိုယ့်ကြောင့်အမှားအယွင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် မတွန့်မဆုတ်ဘဲ ဝန်ခံလိုက်ပါ တောင်းပန်လိုက်ပါ။ အဲ့လိုတောင်းပန်လိုက်တာက မာနကို ထိခိုက်မသွားတဲ့အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ ရိုးသားမှုကိုပါ လူတွေက လေးစားလာကြမှာပါ။
လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်မလွှတ်ဘဲ မုန်းတီးပြီးနေမယ့်အစား ခွင့်လွှတ်ပြီးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ခွင့်မလွှတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာက ကိုယ့်အနေနဲ့ ခံစားရဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ ခွင့်မလွှတ်ပေးတတ်တဲ့အကျင့်လေးကို ပြင်လိုက်ပါ။
၄. ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်သူ၊ နှိမ့်ကျတဲ့သူဆီကနေမသင်ယူခြင်း
ပညာဆိုတာ ဘယ်တော့မှသင်လို့ကုန်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရာထူးအမြင့်ဆုံး ဒါရိုက်တာဖြစ်နေရင်တောင်မှ ကိုယ်မသိတာသေးတာတွေအများကြီး သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိနေဦးမှာပါ။ ကိုယ်မသိသေးတာကို ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူကဖြစ်ဖြစ် သိနေ တတ်နေရင်လည်း သူတို့ဆီကနေ ပြန်လည်သင်ယူတာက ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
ပိုက်ဆံဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါ။ အဲ့ဒီပိုက်ဆံမျက်နှာကိုမှ မထောက်ဘဲ ကိုယ့်ကို စေတနာနဲ့ ပိုက်ဆံချေးပြီး ကူညီပေးလိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ တန်ဖိုးမထားချင်တောင်မှ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့ အကြွေးပြန်ဆပ်ရပါမယ်။ ကိုယ့် လည်းအဆင်ပြေရဲ့သားနဲ့ ပိုက်ဆံလည်းရှိရဲ့သားနဲ့ အကြွေးပြန်မဆပ်ဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အကြွေးကင်းခြင်းက သင့်ဘဝကို ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့်အကြွေးပြန်မဆပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ။
Source – lifehack, inc